Wakiilka Victor Lindelof oo xaqiijiyay in Barcelona ay dalabyo u dirtay kooxda Manchester United – Gool FM
Dajiye September 29, 2019
(Manchester) 29 Sebt 2019. Wakiilka daafaca reer Sweden iyo kooxda Manchester United ee Victor Lindelöf ayaa xaqiijiyay in Barcelona ay dalabyo dhowr ah u gudbisay xiddiga uu dalaalka ka yahay inta lagu guda jiray suuqii kala iibsiga ee xagaaga.
Barcelona ayaa isku dayday inay u weecato saxiixa Victor Lindelöf, kaddib markii ay ku guuldareysatay raacdadii ay ugu jirtay heshiiska ay ku dooneysay Matthijs de Ligt.
Laakiin Blaugrana ayaa waxay kaddib wadahadal la yeelatay maamulka Red Devils in ka badan hal jeer si ay kaga hesho daafaca reer Sweden ee Victor Lindelöf, laakiin jawaab celinta ayaa waxay markasta aheyd in Lindelöf uusan iib aheyn.
Haddaba wakiilka Victor Lindelöf ee Hasan Cetinkaya ayaa wareysi uu bixiyay wuuu ku sheegay:
“Markii daafaca reer Holland ee Matthijs de Ligt uu doortay inuu u dhaqaaqo kooxda Juventus, Victor Lindelöf wuxuu noqday dooqa kooxda Barcelona xagaagii hore”.
“Waxay la xiriireen madaxa fulinta ee kooxda Manchester United Ed Woodward, waxayna soo bandhigeen dalabyo gaar ah”.
“Laakiin Red Devils waxay sheegtay in Victor Lindelöf uusan iib aheyn, waxaa laga yaabaa inuu ahaa mid ka mid ah xiddigihii ugu fiicnaa kooxda xilli ciyaareedkii hore”.
“Waxaan kulan la yeeshay Matt Judge, oo isagu mas’uul ka ah howlgalada dhanka suuqa ee kooxda Manchester United, si ay wadahadalada u sii socdaan, laakiin wuxuu ii sheegay inaysan macquul aheyn inuu dhaqaaqo”.
Tababare Solskjær oo hoosta ka xariiqay muhiimadda ay u leedahay haddii ay ka adkaadaan Arsenal kulanka habeen danbe